Danjire Ayaan Cashuur oo sharraxday muhiimada doorashooyinku u leeyihiin Somaliland | Dhaymoole News
Danjire Ayaan Cashuur oo sharraxday muhiimada doorashooyinku u leeyihiin Somaliland
London(Dhaymoole)-Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa caddaysay ahmiyada ay dimuqraadiyada dalka ugu fadhido doorashadii saddexaad ee madaxtooyada oo qorshaysan inay qabsoonto 13 November ee sannadkan. Taasi oo noqonaysa doorashadii lixaad ee Somaliland ka qabsoonta tan iyo 2002-dii oo uu dalka ka tisqaaday nidaamka axsaabta badani.
Waxa kaloo xukuumaddu shaacisay in dawladda Ingiriisku ay doorashada madaxtooyada u soo diri doonto goobjoogeyaal gaadhaya 60 xubnood oo u kuurgeli doona nidaamka ay u qabsoomayso.
Sidaasna waxa lagu sheegay qoraal loogu talogalay warbaahinta oo ka soo baxay shalay xafiiska safaaradda Somaliland ku leedahay UK, oo ay ku saxeexnayd danjire Ayaan Maxamuud Cashuur, waxaannu u qornaa sidan:- “Doorashada madaxweynenimo oo qorshaysan inay dalka ka dhacdo 3 November, 2017, ayaa noqon doonta tii saddexaad ee la qabto, iyadoo labadii hore kala dhaceen sannadihii 2010 iyo 2003. Doorashooyinka kale dalka ka dhacay waxa ka mid ahaa Golaha Wakiillada 2005 iyo laba doorasho oo kuwa deegaanka ah oo kala qabsoomay 2002 iyo 2012.
Dhammaan doorashooyinkaa goob-joogayaashii caalamiga ahaa iyo kuwo maxaliga ahaaba waxay ku sifeeyeen kuwo caddaalad iyo xor u dhacay. Doorashadii madaxweynenimo ee 2003 ayaa lagu kala helay codad aad u yar, balse noqotay natiijo dhammaan dhinacyadii ixtiraameen. Diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka ayaa laga qabtay dhammaan degaannada dalka, oo ku jiraan degmooyinka gobollada barriga fog ee Sool iyo Sanaag.
Dastuurka Somaliland oo dhigaya in saddex xisbi siyaasadeed ee dalku yeesho. Madaxweynaha wakhtigan Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa ka tanaasulay inuu xilli dambe isu-sharraxo madaxtinimada. Md. Muuse Biixi Cabdi ayaa loo doortay murrashaxa KULMIYE, (xisbiga Nabada, Midnimada & Horumarka), Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillahi (Cirro) ayaa ah Murrashaxa xisbiga WADANI, halka Md. Eng. Faysal Cali Xuseen (Waraabe) murrashax u yahay xisbiga kale ee mucaaradka ah ee UCID (Xisbiga Caddaaladda iyo Daryeelka).
Xidhiidhada taariikhiga ee u dhaxeeya UK iyo Jamhuuriyada Somaliland, iyo jiritaanka muwaadiniin badan oo reer Somaliland ee degan UK, doorashooyinka madaxweynenimada ee Somaliland ayaa si weyn loo dannaynayaa. Dad badan oo degan UK, ayaa u socdaali doona Somaliland bisha November si ay uga soo codeeyaan, haddii hore loo diiwaangeliyey, ama ay joobjoog u noqdaan doorashada.
Dawlada UK waxay taageero dhaqaale ku bixisay nidaamka diiwaangelinta codbixiyeyaasha, waxayna dhowaan shaacisay inay taageeri doonto goob-joogayaal caalami ah oo gaadhaya 60 qof, oo ka qeybgala.
Inkastoo weli beesha caalamku aqoonsanayn, Jamhuuriyada Somaliland waa dal madax-bannaan oo bishii May 1991-kii la soo noqday madax-bannaanidiisa, isla markaana Somaliland abuurtay dawlad dimuqraadi ah oo xasiloon, oo leh dastuur lagu ansixiyey afti qaran. Nidaam dawladeed ka kooban waaxda Fulinta, waaxda Sharci-dejinta iyo Garsoorka. Doorashooyinka madaxweynenimada dhowaan dhacayana waa u muhiim.”